र्यान स्मिथका लेखहरू Martech Zone |
द्वारा लेखहरू रायन स्मिथ
रायन रैडियसको सामाजिक मिडिया र व्यवसाय विकासको प्रबन्धक हुन्। उहाँ एक सार्वजनिक सम्बन्ध व्यवसायी हुनुहुन्छ जो सामाजिक मिडियालाई मार्केटिंग संचार उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्नमा माहिर छन्। रायनसँग खेल, राजनीति, रियल एस्टेट, र अन्य धेरै उद्योगहरूमा अनुभव छ।
कुरा गर्न बन्द गर्नुहोस् र सुन्नुहोस्
मङ्गलबार, जनवरी 29, 2013 मङ्गलबार, जनवरी 29, 2013 रायन स्मिथ
सामाजिक मिडिया सामाजिक छ। हामी सबै सुनेका छौं कि एक लाख पटक। हामी सबैले यो एक मिलियन पटक सुन्नुको कारण हो किनकी यो एकल लगातार नियम हो जुन कसैले पनि सोशल मिडियाको बारेमा प्रमाणित गर्न सक्छ। मैले नियमित आधारमा देखेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको उनीहरू आफ्ना अनुयायीहरूमा उनीहरूसँग कुरा गर्नु भन्दा कुरा गरिरहेका छन्। भर्खर हामीले एउटा ग्राहकको बारेमा ट्विटरमा ग्राहक गुनासो भेट्टायौं।
सामाजिक मिडिया नयाँ PR हो
सोमबार, सेप्टेम्बर 20, 2010 शनिबार, अक्टोबर 18, 2014 रायन स्मिथ
मैले हालसालै आफ्ना केही सँगी सार्वजनिक सम्बन्धका पेशेवरहरूसँग खाजा खाएको थिएँ र जहिले जहिले पनि कुराकानीले हाम्रो उद्योगमा प्रयोग गरिएका युक्तिहरू र प्रविधिहरूतर्फ फर्क्यो। समूहमा एक मात्र व्यक्तिले सोशल मीडियालाई ग्राहकहरूको लागि सञ्चारको एकमात्र रूपको रूपमा प्रयोग गरेको छ, कुराकानीको मेरो अंश समूहको सब भन्दा छोटो देखिन्छ। यो केसमा परिणत भएन, र यसले मलाई सोच्न लगायो: सोशल मिडिया अब छैन
सोमबार, अगस्ट 23, 2010 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 रायन स्मिथ
ट्विटरमा ठूलो अनुयायी आधार विकसित गर्न यो सजिलो छैन। सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको यी अनलाइन "व्यवसायहरू" मध्ये एकबाट त्यस्तो सेवाहरू प्रदान गर्ने हजारौं अनुयायीहरू खरिद गरेर तपाईंको पैसा बेच्ने हो। अनुयायीहरू खरीदबाट के फाइदा लिन सकिन्छ? त्यसोभए के हुन्छ यदि तपाईंसँग १,15,000,००० अनुयायीहरू छन् जुन तपाईंको व्यवसाय र सन्देशमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कुनै चासो छैन? अनुयायीहरू खरिद गर्दा मात्र काम गर्दैन, किनभने ठूलो अनुसरण गर्दै
बुधबार, जुलाई 28, 2010 आइतबार, अगस्त 19, 2012 रायन स्मिथ
तपाईंको सार्वजनिक सम्बन्ध अभियानको भागको रूपमा सामाजिक मिडिया प्रयोगको उत्तम अंश जान्न चाहनुहुन्छ? त्यहाँ कुनै नियम छैन। PR मानिसहरुलाई लगातार नियमहरुको सम्झना गराईन्छ। हामीले एपी स्टाइलबुक अनुसरण गर्नुपर्दछ, समाचार रिलिजहरू निश्चित तरिकाले लेख्नुपर्दछ र निश्चित समयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। सामाजिक मिडिया तपाइँको कम्पनी को लागी मोल्ड तोड्न र अद्वितीय सामग्री सिर्जना गर्न को लागी एक अवसर हो जुन वास्तवमा तपाईको जनतालाई महत्व दिन्छ। कुञ्जी शब्द